Immisa ayay Uber Cuntaa Darawalada? - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Immisa ayay Uber Cuntaa Darawalada?
Uber Eats waxaa adeegsada malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida si ay u helaan cuntooyin degdeg ah oo socda.
Waaxda bixinta cuntada ayaa si xawli ah u kordhaysa maalmahan, iyo shirkadaha kala duwan ee bixiya cuntada, sida Uber Eats, ayaa had iyo jeer raadinaya darawalo si ay macaamiisha u gaarsiiyaan cuntada.
Tani waxay u badan tahay inay tahay waqtiga ugu wanaagsan ee la baaro suurtagalnimada inaad u shaqeyso sidii Darawalka Bixinta Uber oo aad aragto haddii ay ku habboon tahay hab -nololeedkaaga.
Si fudud u akhri maqaalka oo dhan si aad u ogaato inta lacag ah ee aad samayn karto sida darawalka Uber Eats iyo sida loo kordhiyo dakhligaaga.
Uber Eats waa madal gaarsiinta cuntada adduunka oo dhan taas oo u oggolaanaysa maqaayadaha inay cuntada gaarsiiyaan macaamiishooda. Makhaayaduhu waxay ku habayn karaan koontooyinkooda gaarsiinta cuntada sida ay u baahan yihiin.
Waxay kaloo ka iibin karaan adeegyada makhaayadooda macaamiisha iyagoo adeegsanaya app -ka, iyagoo ballaarinaya gaaritaankooda oo ay suuragal tahay inay kordhaan ganacsiga soo noqnoqda.
Waxaad u adeegsan kartaa barnaamijka Uber Eats app inaad ka dalbato makhaayad, makhaayaddu way aqbashaa oo diyaarisaa amarka.
Dareewalka gaarsiinta Uber Eats wuxuu ka aqbalaa amarka app -ka, wuxuu ka soo qaadaa maqaayadda, wuxuuna u gudbiyaa macaamilka.
Baadhid: Intee in le'eg ayay Servers ka kasbadaan USA? | Adeegayaasha ugu mushaarka badan 2021
Sidee Uber Cunnadu U Shaqaysaa?
Uber Eats waxay u shaqaysaa si cad. Dhab ahaan, qaar dhexdhexaadiyeyaal ah oo cuntada ka soo qaata meelaha wax lagu cuno ee maxalliga ah una gudbiya macaamiisha ayaa looga baahan yahay nidaamkan qaybinta cuntada inuu si hufan u shaqeeyo.
Goobaha wax lagu cuno caadiyan kuma tiirsana shaqaalahooda oo kaliya si ay cuntada u keenaan. Taa baddalkeeda, meheradahaani waxay ku tiirsan yihiin adeegga gaarsiinta dibadda ee Uber Eats, kaas oo shaqaaleysiiya qandaraaslayaal madax bannaan. Waxaad timid goobta.
Intaa waxaa sii dheer, sida darawalka rideshare, waxaad ku shaqayn kartaa sida Darawalka Bixinta Uber adiga oo wata gaadhigaaga. Xitaa waxaad ka shaqaysan kartaa qaabab kale oo gaadiid oo magaalooyinka qaarkood ah, sida: Baaskiiladaha, mootooyinka, ama socodka.
Waxaad heli doontaa amar waxaana laguu wareejin doonaa makhaayad waxyar kadib markaad dhameysato rakibida barnaamijka Uber Eats oo iska qor darawal ahaan. Adiga ayaa hadda mas'uul ka noqon doona qaadista amarka cuntada oo aad u geyso macaamilka.
Si kastaba ha ahaatee, shaqadu maaha mid toos ah sida ay u muuqato; dakhligaaga guud sida Darawalka Bixinta Uber waxaa go'aamiya dhowr arrimood.
Arag sidoo kale: Waa imisa Darawalada Uber | 13 Darawalada Uber ee ugu mushaarka badan 2021
Waxaan rabaa inaan Noqdo Darawal Cunto Uber, sideen u maraa?
Noqoshada darawalka Uber Eats waa mid aad u fudud. Xitaa uma baahnid waayo -aragnimo badan si aad u noqoto darawal Uber Eats maxaa yeelay heerarka shirkadu aad uma adka.
Dadka intiisa badan waa inay awoodaan inay codsadaan booska Uber Eats Driver. Si aad u noqoto Darawal Bixinta Uber, waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda:
Waa inaad ugu yaraan ku jirtaa 19 si aad uga qayb qaadato.
Uber waxay doorbideysaa darawalada qibrada leh si ay u maareeyaan hawlgallada maalinlaha ah, sidaa darteed waa inaad haysataa liisanka darawalnimada Mareykanka ee hadda shaqeynayay ugu yaraan hal sano.
Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad keento caddaynta caymiska baabuurka ee hadda jira iyo sidoo kale diiwaangelinta gaadhigaaga.
Sababtoo ah inta ugu badan ee raashinka la geeyo ayaa ku jira qiyaasta miisaanka 5-10 rodol, waa inaad awood u yeelatid inaad maareyso alaabo badan.
Sidee loo Saxeexaa?
Is -qoritaanka inaad noqoto Darawal Cunto Uber waa mid toos ah oo degdeg ah. Si aad u noqoto darawal Uber Eats, si fudud u raac talaabooyinkan fudud:
Fur barnaamijka Uber Eats ama tag websaytkooda oo buuxi foomka “Saxiix hadda” oo leh macluumaadka khuseeya.
Dooro magaalada aad rabto inaad kaxayso.
Uber hadda waxay soo bandhigi doontaa liiska xulashooyinka gaadiidka gudbinta ee magaaladaada. Baabuurta, baaskiiladaha, mootooyinka, iyo socodka ayaa tusaale u ah hababkaan gaadiidka.
Iyada oo ku xidhan ikhtiyaarka qaybinta ee aad doorato, liiska shahaadooyinka loo baahan yahay ayaa shaashaddaada ka soo muuqan doona.
Aqoonsiyada sawirka, liisanka darawalnimada, hubinta taariikhda, iyo diiwaangelinta baabuurka ayaa ah dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah in la soo raro.
Ka dib markaad akhrido oo aad oggolaato shuruudaha, guji badhanka gudbinta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in lagaa codsado inaad cuntooyin gaarsiiso darsin ama in ka badan oo shaqaale gaajaysan ah, taasoo keentay culeysyo culus, waana inaad sidoo kale xamili kartaa taas.
Waa inaad ka gudubtaa jeegga taariikhda Uber oo dhan.
Waa maxay Faa'iidooyinka Uber Cunto Darawal?
Waxaa jira faa'iidooyin kala duwan darawalka Uber Eats. Waxaa ka mid ah:
Noocyo gaadiid oo kala duwan ayaa la heli karaa: Adiga ayaa go'aan ka gaari doona sida aad doonayso inaad u keento. Si aad cuntooyinka u gaarsiiso macaamiishaada, waxaad wadi kartaa baabuur, baaskiil wadid, fuuli kartaa mootada, ama xitaa socon kartaa.
Waad shaqayn kartaa mar kasta iyo inta aad rabto: Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad shaqayso hal saac, dhowr saacadood, dhammaadka toddobaadka, ama maalmo badan toddobaadka oo dhan.
Lacag -bixinta ayaa isla markiiba la sameeyaa: Faa'iidooyinkaaga isla markiiba waxaa loo diraa koontadaada bangiga toddobaadkiiba mar markaad u kaxayso Uber Eats. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Pay Instant Pay si aad ula baxdo lacagtaada ilaa shan jeer maalin kasta.
Raadinta dakhliga ku soo gala waa mid sahlan: Waad arki kartaa inta lagu siin doono bixinta amarka ka hor intaadan aqbalin keenista. In-app-ka, waxaad sidoo kale arki kartaa inta macaamiishaadu kuu tilmaamayaan.
Waxaad xor u tahay inaad fasax qaadato wakhti kasta oo aad doorato: Waad beddeli kartaa oo aad damin kartaa codsiyada gudbinta mar kasta oo aad rabto barnaamijka Uber Eats Driver app.
Is -qoritaanku waa mid sahlan: Uber Eats app wuxuu kugu dhex socdaa habka diiwaangelinta koontada, qaadista amarada, iyo gaarsiinta.
Looma baahna in hore loo sii qorsheeyo: Uber Eats 'Boost and Surge promos ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad hesho lacag dheeri ah.
Qasaarooyinka Darawalka Uber Cuna?
Mushaharku waa yar yahay: Darawalada gaarsiinta Uber Eats waxay bixiyaan celcelis ahaan lacag -bixinnada ugu yar.
Mushaharku ma aha mid joogto ah: Uber Eats wadayaasha ayaa maalmo ka badan lacag ka badan kuwa kale, laakiin tani had iyo jeer ma aha kiiska.
Duuggaaga jeexitaankiisa iyo jeexitaankiisa: Dayactir badan oo soo noqnoqda iyo safarada gaaska si aad shidaal uga hesho ayaa loo baahan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaad jari kartaa masaafadaada inta aad xareynayso canshuurahaaga si ay kaaga caawiso yareynta kharashyada qaarkood. Goynta masaafada waxay ahayd 57.5 senti halkii mayl sanadka 2020.
Software -ka ayaa marmar ku guuldareysta inuu shaqeeyo: Marka darawalada Uber Eats ay isticmaalaan iPhones -kii hore, cayayaanka iyo dhibaatooyinku waa caadi.
Way adag tahay in la xisaabiyo qiimaha saxda ah ee Darawalada Bixinta Uber maxaa yeelay waxay ku tiirsan tahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan goobtaada, habka gaadiidka, iyo duruufaha kale ee aan la xakamayn karin sida taraafikada.
Intaas waxaa sii dheer, websaydhka rasmiga ah ee Uber, ma jiro qiyaas mushahar oo la soo jeediyay saacad kasta. Uber, dhanka kale, waxay xoogga saareysaa faa'iidooyinka kale sida jadwalka dabacsan.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego qiimaynno badan oo onlayn ah, darawalada Uber Eats ayaa sida caadiga ah qaata wax ka yar mushaharka ugu yar.
Darawalada ayaa celcelis ahaan sameeya qiyaastii $ 3.5. Sababtoo ah waqtiyada sugitaanka iyo dib -u -dhacyada kale ee bixinta, qaddarka ayaa laga yaabaa in loo yareeyo wax ka yar mushaharka ugu yar. Si kastaba ha ahaatee, hawshani waxay leedahay saamayn taban.
Runtii ma mudan tahay?
Ma mudan tahay waqtigaaga, marka la eego inta dakhli ee Uber Eats uu helo iyo kharashyada la socda? Ma awoodi doontid inaad ka fariisato hodan adigoo ku kaxeynaya Uber Eats, laakiin waxaad awoodi doontaa inaad ku kabto dakhligaaga waqtiga firaaqada.
Qorsheyso inaad keento cunnada maqribka saacadaha degdegga ah si aad u hagaajiso dakhligaaga. Maskaxda ku hay in darawalada Uber Eats ay inta badan ka helaan lacag ka yar darawalada wadaagista Uber, kuwaas oo caadiyan qaata inta u dhaxaysa $ 11 iyo $ 16 saacaddii.
Haddii aad maskaxda ku hayso ujeeddooyin maaliyadeed oo gaar ah oo aad raadinayso ikhtiyaar aad u yar, ikhtiyaar ballan-qaad ah oo lagu kabo dakhligaaga, noqoshada darawalka Uber Eats ayaa kugu habboonaan kara.
Uber Ma Cuntaa Kharashaadka Darawalada ee saameeya Mushaharkooda?
Marka la xisaabinayo inta darawal ee Uber Eats ay kasbato, waxaa muhiim ah in la qiimeeyo kharashyadooda.
Waxaad u shaqeysaa sidii qandaraasle madaxbannaan sida darawalka Uber Eats.
Taas macnaheedu waa inaadan Uber dib kuugu celin doonin wixii kharash ah ee ku baxay markaad fulinaysay dhalmada.
Kharash noocee ah ayaad filaysaa inaad gasho?
Halkan waxaa ku yaal dhowr meelood oo ka mid ah kuwa ugu caansan:
Haddii aad gaarsiinayso dhalmada Uber Eats adiga oo isticmaalaya baabuur matoor leh, waa inaad bixisaa batroolka. Tani waa wax, murugo leh, oo qiimaheedu sii kordhayo.
Markaad soo qaadato gaadhi shidaalka ku shaqeeya oo si hufan u kaxeeya, waxaad dhimi kartaa kharashyadaada. Fiiri kuwan 16 siyaabood oo darawalada rideshare ay lacag ugu kaydin karaan gaaska fikrado badan.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan loo eegin sida wax ku oolka ah ee aad u kaxaysato, kharashka gaasku wuxuu dhimi doonaa faa'iidooyinkaaga.
2. Dayactirka Gaadiidka
Haddii gaadhigaagu aanu si fiican u shaqaynayn, ma awoodi doontid inaad samaysid. Tani waxay u baahan tahay dayactir joogto ah sida isbeddelka saliidda, taayirada cusub, iyo beddelidda qaybaha duugoobay.
Lacag baad ku keydsan kartaa aaggan adiga oo shaqadaada qabanaya haddii aad xirfad leedahay, laakiin tani ma aha ikhtiyaar shaqsiyaad badan.
Intaa waxaa sii dheer, dhammaan mayllada dheeraadka ah ee aad u safrayso Uber Eats waxay sababi doontaa in baabuurkaagu si dhakhso ah u dhammaado.
3. Bixinta Deymaha Baabuurka
Haddii aad u isticmaaleyso baabuur si aad u keento, waxaa laga yaabaa inaad bixinayso deyn baabuur. Haddii kale, haddii aad leedahay heshiis kiro Uber, waxaad bixin doontaa taas sidoo kale.
In kasta oo u kaxaynta Uber Eats aysan wax saamayn ah ku lahayn xaddiga lacag -bixintaas, waa inaad weli la socotaa.
4. Caymiska baabuurka
Caymiska baabuurku waa kharash kale oo ay tahay inaad sharci ahaan ku bixiso, iyadoon loo eegin sida aad u isticmaasho gaarigaaga.
Waa wax cajiib ah inaad u kaxaysato Uber Eats maxaa yeelay waxaa jira khataro ka yar kuwa aad qaadi lahayd rakaabka.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad haysataa caymiska gobolku u xilsaaray. Markaad xisaabineyso inta lacag ah ee aad ka hesho Uber Eats, maanka ku hay kharashkan.
5. Magaca Baabuurka, Diiwaangelinta, iyo Canshuuraha
Qaddarka kharashaadka kama dambaysta ah ee liiskayagu wuu kala duwanaan doonaa iyadoo ku xiran gobolkaaga.
Adigu, si kastaba ha ahaatee, waa inaad iyaga siisaa xaalad kasta. Sidaad arki karto, waxaa jira kharashyo badan oo la xiriira gaarsiinta Uber Eats marka loo eego inta badan darawalada. La soco kharashyadan maadaama laga yaabo inaad ka jarto.
Intaa waxaa dheer, waxaa lagaa doonayaa inaad canshuur ka bixiso dakhligaaga Uber Eats.
Uber kama jarto wax canshuur ah dakhligaaga maxaa yeelay waxaad tahay qandaraasle madaxbannaan. Waa inaad bixisaa canshuurahaas marka aad xareynayso, markaa hubso inaad haysato xoogaa lacag ah.
Waa Maxay Qaab -dhismeedka Lacag -waduhu?
Shanta arrimood ee soo socda ayaa saamayn ku leh heerka mushaharka darawalada gaarsiinta cuntada:
Qiime daqiiqad ah
Qiimaha la dhimay iyo isku dhufashada boodhka
Mid kasta oo ka mid ah shantan shuruudood ayaan si faahfaahsan hoos ugu burburin doonnaa.
1. Kharashka Qaadista
Lacagta soo-qaadistu waa qiimo go'an oo aad bixiso mar kasta oo aad soo qaadato amar maqaayad.
Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad ka soo qaadato amaro fara badan hal goob qaadid waqti isku mid ah. Ku -dhufte ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo qaddarkan mararka qaarkood.
2. Kharashka ka-tegidda
Kharashka keenista ayaa laga yaabaa inuu yahay erey ka fiican qiimaha hoos u dhaca. Waxaad heli doontaa qiime go'an haddii aad si guul leh u dhammaysato dalabka cuntada. Lacagtan ayaa la bixiyaa mar kasta oo aad cunto ku riddo meel cayiman.
Markaa, xitaa haddii aad makhaayad ka soo qaaddo alaabooyin badan, kharashka ka-tegidda ayaa la adeegsan doonaa mar kasta oo aad gaarto macmiil cusub.
3. Heerka Mileage
Masaafada u dhexaysa soo-qaadista iyo boosaska ayaa lagu meeleeyay qaybtan magdhowgaaga ah.
Barnaamijka Uber, dhanka kale, wuxuu shaqaaleeyaa sicirka ugu waxtarka badan. Ma la socoto masaafada dhabta ah ee aad tagto. Sidoo kale ma tixgelinayso masaafada aad tagto goobta xigta ee soo qaadistaada.
Waxaa kale oo xusid mudan in sicirkan uu ku ansaxayo meelo yar, oo ay ku jiraan New York iyo Los Angeles.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto haddii Uber ee magaaladaada ay bixiso masaafada. Waxaad heli doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan meesha aad gaarsiinayso iyo sicirka lacagta markaad is -qorto si aad baabuur u waddo.
4. Qiimee Daqiiqadaha
Laga soo bilaabo maqaayaddii ugu horreysay illaa laga soo dego, barnaamijka gaarsiinta cuntada ee Uber ayaa la socon doona inta ay kugu qaadanayso dhammaystirka amarrada. Wakhtigii ku qaatay qancinta codsiyadaan gaarsiinta, waxaa lagu siin doonaa magdhow.
Tani waxay sidoo kale u dhigantaa heerka masaafada. Waxaa la xisaabiyaa iyadoo la isticmaalayo wakhtiga safarka la saadaaliyay halkii laga isticmaali lahaa waqtiga safarka dhabta ah.
Markaa nasiibku wuu kaa dhammaaday haddii aad ku raagto taraafikada ama aad casho ka sugto makhaayad. Intaa waxaa dheer, heerka daqiiqada waxaa laga heli karaa oo kaliya dhowr magaalo.
5. Kor u qaadista Wax -taridda iyo Dhimista Kharashka
Qaybta yaraynta qiimaha tikidhada ayaa ah qodobka ugu dambeeya ee go'aaminaya mushaharkaaga Uber Eats.
Uber Eats ayaa laga yaabaa inay ku siiso lacag yar iyadoo ku xiran magaalada aad keento iyo nooca gaadiidka aad isticmaasho si aad u dhammaystirto amarka.
Marka darawallada ay gabaabsi yihiin, koror kordhiye ayaa la hawlgeliyaa. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa in lagu siiyo lacag dheeraad ah oo kugu dhiirrigelisa inaad baabuur waddo.
Asal ahaan waa kala duwanaansho u gaar ah cuntada ee Qiimaha Kordhinta. Kahor intaadan aqbalin, Uber ayaa kuu sharxi doonta isku dhufashada.
Lacagtaada saafiga ah waxaa lagu dhufan doonaa isku-dhufte marka aad oggolaato oo aad si guul leh u dhammaystirto raacitaanka. Isticmaalka isku dhufashada waa hab weyn oo lagu hagaajin karo dakhligaaga xitaa in ka badan.
Ilaa intee baan badbaadin doonaa aniga iyo xogta shaqsiyeed haddii aan noqdo darawalka Uber Eats?
Uber Eats waxay ku faantaa amniga isticmaaleyaasha app -ka, darawalada, iyo macaamiisha labadaba. Koox nabadgelyo oo caalami ah ayaa u heellan ka hortagga xadgudubyada amniga iyo shilalka gaadiidka ee ururka.
Sidee Uber Eats uga duwan tahay barnaamijyada kale ee cunto-gaarsiinta marka la eego wadista baabuurka?
Qaar ka mid ah wadayaasha gaarsiinta cuntada, si ka duwan shaqaalaha Uber Eats, ma awoodaan inay shaqeeyaan saacado dabacsan mar kasta oo ay doortaan. Waxaad u kaxayn kartaa Uber Eats waqti buuxa, waqti-dhiman, sida diraye, ama qandaraasle madaxbannaan.
Ma inaan ku kaxeeyaa Uber Eats waqti cayiman ama tiro saacado ah?
Maya. Waxaad ku dooranaysaa jadwalkaaga Uber Eats. Adiga ayaa dooranaya markaad rabto inaad lacag hesho iyo inta aad rabto inaad kaxayso.
Sideen ku ogaan karaa inta lacag ah ee aan sameeyay kadib markaan cuntada keenay?
Barnaamijka Uber Eats Driver app wuxuu ka dhigayaa mid fudud in la garto oo lala socdo dakhligaaga. Waqti kasta, waxaad ka arki kartaa qiimaha lacageed ee faa'iidooyinkaaga xagga sare ee shaashaddaada.
Haddii adiga oo ah guru Internet ahaan aad raadisay buuq dhinac ah oo sharci ah oo kugu kasban kara weyn…
Faafida COVID-19 ayaa fursado badan u furtay qeybta waxbarashada. Mid ka mid ah fursadahaas…
Ma ogtahay in lagu siin karo lacag si aad miisaankaaga u yaraato? Waxay u egtahay mid qosol leh? Mushaharka luminta miisaanka…